नेता ज्यु ! यो आन्दोलन कसका लागि र के का लागि ? - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
नेता ज्यु ! यो आन्दोलन कसका लागि र के का लागि ?
आज भोली सामाजिक सन्जाल देखी संचार जगतमा खाली प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओलीको असंबैधानिक कदमको बिरोधमा आन्दोलन गरेको मात्र देखिन्छ । सुरुसुरुमा त मलाई पनि आन्दोलनमा जाउ जाउ लाग्दथ्यो यात्राो त्याग बलिदान र संघर्शबाट प्राप्त संबिधान (नियतबस केही अती महत्वपूर्ण बुदामा भएको त्रुटी बाहेक) साच्चिकै उत्कृष्ट नै छ । तर हामै अकर्मन्डताका कारण न आज यो दिन आएको होईन र? किन प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्नु के, के कालागी गाली गर्नु ? हामीले २०६२-०६३ को जन आन्दोलनमा बिभिन्न पार्टिका झन्डा बोकेर आन्दोलन गर्नु गोली खानु घाईते हुनु बाहेक आफ्नै नेतालाई कहिले सचेत गराउने काम गर्न सक्यौ ? न त हाम्रा प्रतिनिधीले हाम्रो संबिधानसभाको सुझाब सन्कलनका क्रममा दिएका सुझाब संबिधान लेखनका क्रममा पालना गर्न सके, नत हामीले त्यस सम्बन्धम पटक पटक जनप्रतिनिधीलाई हाम्रो सुझाबको पालना किन नगरेको भनेर सोध्न सक्यौ। प्रधानमन्त्री सुसिल कोईरालाको नेत्रित्वमा एक थान संबिधान त जनतालाई दिए तर त्यो एक थान संबिधान पनि नेपाली जनताको चहानामा होईनकी बिदेशीको ईसारामा उनिहरुको स्वार्थ अनुरुप बन्यो । र पनि नेपाली जनता सानो सानो कुरामा त्यसै रमाउने खालका छौ नि हामी त्यसैमा रमायौ तर यहाँ त संबिधानलाई आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने काम मात्रा पो भो ।
केही समय अगाडि फर्कौ, संबिधान तयार भयो अब लागु गर्नु पर्‍यो स्थानिय, प्रदेश र संघ गरी देशलाई शक्ती बिकेन्द्रिकरण गरी सन्चालन गर्ने तयारी भयो त्यही अनुरुप स्थानिय तहको चुनाव भयो। कुनै पनि पार्टिमा योगदान गरेका संगठन गरेकाले टिकट पाएनन् टिकट पाए त केबल नेताका आफन्त, नेताका दाँया बाँयाका मान्छे अझ केही उच्च तहका नेताले आफन्त जिताउन मतपत्र समेत च्यातेर आफन्त जिताउने काम गरे। अब भन्नु सर्वसाधारणले के पाए? स्थानिय तहमा बढेको भ्रस्टचार नियन्त्रण गर्न कस्ले ध्यान दियो ? बेदेशी बिबादित सस्थाले नेपालमा खुलमखुल्ल ईसाई धर्म प्रचार गर्न सप्ताहब्यापी कार्यक्रम चलायो , त्यसको जनताले ब्यापक बिरोध गरे,तर हाम्रा नेताले कार्यक्रम रोक्नुको सट्टा कार्यक्रममै सहभागीता नै जनाए, बिदेशी लगानिमा ग्रामिण क्षेत्रमा बिकास र सहयोग गर्ने नाउमा गाउँ गाउँमा हिन्दू धर्म बिरुद्ध संगठनिक रुपले नै प्रहार गर्ने काम गरियो तर कुनै पार्टिका नेता चुयिक्क बोल्न समेत चाहेनन्। निर्मला पन्त लगाएत धेरै चेलीहरु बलत्कार गरी हत्या भयो जनता न्याय माग्दै सडकमा आए तर कुनै पार्टिका नेताले जनतालाई साथ दिएनन् । यही बिचमा कोरनाको महामारी बढ्यो, भ्रस्टचार गर्नेले त्यो मौका पनि छोडेनन् । हामी जनता चुपचाप सहीरहौ, त्यती बेला कुनै नेताले आफुलाई मतदान गर्ने जनताको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्न समेत फुर्सद पाएनन् । केबल आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वार्थ मात्र हेरेर बसे र पनि नेपाली जनता चुपचाप आफ्नै बलबुताले एक अर्कालाई सहयोग गरेर जिउने प्रयास गरे ।
जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्सद बिगठन गरी मध्यावती चुनावको घोषणा गरे तब सबै जसो पार्टिका नेता सडक आन्दोलनमा उत्रिए । हो प्रधानमन्त्रीले गलत गरे । के गलत प्रधानमन्त्रीले मात्रै गरेका हुन त ? सबै कार्यको दोसी केबल प्रधानमन्त्री मात्रै हुन त ? बाँकी नेता चाँही दुधले नुहाएका ? जती प्रधानमन्त्रीको कदम असंबैधानिक छ नि त्यो कदम हुनुमा वा प्रधानमन्त्रीले चाल्नुमा तपाईंहरु जस्ता नेताको पनि उत्तीकै जिम्मेवार रहनु भएको छ । के देशले धन्न नसक्ने संघियता, जनताले नचाहेको धर्मनिरपक्षताका कारण गरीब जनताले तपाईंहरु जस्ता नेता पाल्न कर तिरिरह्नु पर्ने ? देश बिदेशीहरुको क्रिडा स्थल हुँदा समेत नेपाली जनताले चुपचाप सहिदिनु पर्ने ? अनी जब प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरे तब तपाईं हरुको पछी लाग्दै सडकमा जनतालाई दु:ख दिदै आन्दोलन गरिदिनु पर्ने ? त्यो पनि तपाईहरु जस्ता नेताहरुको जागिर जोगाईदिन. सम्सद पुनर्स्थापना त केबल तपाईंहरुलाई जागिरको करार थपिदिने बैधानिक प्रकृया हो। फेरी पनि तपाईं नेताहरुबाट पनि प्रजातन्त्रको हत्त्या हुन्न बन्ने विश्वाश नेपाली जनताले कसरी गर्ने ?
प्रजातन्त्रको बिकल्प भनेको प्रजातन्त्र नै हो, प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नै निर्वाचन हो। प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गरी सकेपछी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जानेकी प्रजातन्त्रलाई फोहरी खेल खल्ने मैदान बनाउने? यदी प्रजातन्त्रको माया लागेको भए यत्रो त्याग बलिदान र संघर्शबाट स्थापित प्रजातन्त्र जोगाई राख्नु पर्छ भन्ने छ भने त चुनाबी प्रकृयामा जानु पर्ने होईन र? किन चुनावबाट भागेको? के चुनावबाट भाग्नु नै प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो? किन आन्दोलनलाई नै रोजेको ? जनता चुनावबाट भाग्नेलाई किन साथ दिने ? प्रधानमन्त्रिले मात्र प्रजातन्त्रको हत्त्या गरेका होईनन्। प्रजातन्त्रमा प्रतिस्प्रधा स्वाभाबिक हो जस्ले जनताको मन जित्ने योजना लिएर जनता माझ जान्छ उसैलाई जनताले सेवा गर्ने मौका मिल्छ। त्यसैले हामी यहाँ छौ भन्दै सडकमा तमास गर्नु भन्दा चुनावको तयारी गरौ। नयाँ जनादेशमा जाउ ।नेता जि यो आन्दोलन कसका लागि र के का लागि ? स्मरण रहोस यो आन्दोलन तपाईंहरुका लागि नै प्रति उत्पादक होला।
(लेखक नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रिय समितिका पुर्ब प्रेस सम्योजक हुन् ।)